izifo Childhood angomama bakhathazekile ikakhulukazi nobaba. Lezi zifo kufanele balungise khona kuphela ngemva kokubonisana udokotela wakho. Phela, ukusetshenziswa okungalungile noma izidakamizwa kungabangela imiphumela ebuhlungu le ngane. Isihloko sanamuhla Bayokhuluma indlela ukuzalela kahle "Polisorb" izingane futhi ukuthi inganikelwa nhlobo. Uma unesithakazelo kulokho izimo ukusebenzisa izidakamizwa futhi ukuthi unakho ethile, kufanele ufunde ulwazi ngezansi.
Incazelo emfushane ye nomuthi
Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa "Polisorb" izingane, ukulaya ku ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa kufanele kahle uphenyo. Akuvumelekile ukusebenzisa izidakamizwa bebodwa isikhathi eside. Uma ingane ikhishwa isikhalazo noma ucabanga ukuthi lidinga "polysorbate", kufanele kuqala uxhumane onguchwepheshe. Wayevame ebekiwe inhlanganisela nezinye izidakamizwa.
izidakamizwa Itholakala powder ifomu lamahhala-esilazayo. Phama "Polisorb" imiqulu ezahlukene. Ekhemisi ungakwazi ukuthenga umuthi linesisindo 3 kuya 50 amagremu. Kufanele libe inani lemali elincane imithi (owodwa sachet) ruble angu-20. Inani amabhange ngobukhulu ungaphakathi uhla ruble 300 kuya 400. Thola izimpahla kungaba ngaphandle kadokotela. It kubhekwa izidakamizwa ukulungiselela ephephile "Polisorb" (kuhlanganise nezingane ingasetshenziswa). Ingabe kunjalo ngempela?
"Polisorb" ukuthi izingane kungaba?
Lo mbuzo ivamise ukucelwa ngezinye abathengi. Omama kanye obaba ungafuni ubuhlungu Daze zakhe, ukuze ukufunda ngokucophelela izidakamizwa ngaphambi lona. Nomuthi "Polisorb" abantwana yabelwe. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa kubhekwa ephephile ngenxa yokuntuleka ukuncela. izidakamizwa izidakamizwa esebenzayo Silicon dioxide. Ngemva kokuphathwa temlomo, akazange absorbirbiruetsya kusukela esiswini noma emathunjini. izifundo zokwelapha baye babonisa ukuthi isidakamizwa excreted ngokuphelele zinjalo. Lokhu kusho ukuthi ngeke abe noma ikuphi ukonakaliswa umsebenzi kwezitho futhi izinhlelo ingane. Ngokuvamile izidakamizwa kunikezwa abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa (emazingeni ahlukahlukeneko).
"Polisorb" izingane imfundo manual uncoma hhayi ukusebenzisa uma kukhona izinsolo ukopha zangaphakathi. isilonda esiswini esigabeni oyingozi sokulungiselela futhi kufanele uyekwe. Imithi angeke inikezwe izingane abanale hypersensitivity kuya izingxenye zalo. Akuvunyelwe ukwelashwa wengane nge sorbent atony emathunjini. Uma isiguli abasha uneminye wokugaya ukudla isifo uhlelo, kufanele uxoxe kungenzeka ukusetshenziswa imithi nodokotela wakho. Yodwa a specialist ngemva anamnesis futhi izikhalazo sokunquma ungasho kwamukelekile ukunikeza "Polisorb" izingane. Umthamo zomuthi amaqembu athile yobudala izokwethulwa kwesikhathi kulesi sihloko.
Kusho "Polysorb" kuyinto enterosorbent wezinto polyfunctional abakhipha ngokukhishwa kobuthi egazini, sorption, ulwelwesi kanye nemiphumela antioxidant. izidakamizwa Isekelwe isibe Silica ziyasakaza kakhulu. Umthelela ethola izidakamizwa okubangelwa esiyinhloko nomphumela waso. Umuthi iqoqa ekuqongeleleni engakhi pheshana emathunjini, bese ubonisa kubo ngendlela engokwemvelo. Imithi siyasebenza ngokumelene amagciwane namagciwane, ubuthi Lokudabuka ezahlukene, antigen kanye nomzimba (ukudla, yasendlini, nemithi), nosawoti of izinsimbi ezisindayo, utshwala, radionuclides. Umuthi akasabeli ngempahla wathi, kodwa nje kusiza ahlanze umzimba kubo.
Kubalulekile ukuthi izidakamizwa akusho ukunciphisa inani microflora ezuzisayo emzimbeni wesiguli. Lokhu ugwema nezinkinga ukugaya okwalandela. Noma kunjalo imithi esiza ekunciphiseni cholesterol, urea, bilirubin nezinye izingxube zamakhemikhali ukuthi balimaze abantu. Zifakwe imithi uma kwenzeka ubuthi yinto ehlukile, komzimba, sibi zokuphefumula igciwane lohlobo, izifo ezibangelwa amagciwane, njalo njalo. Ake sihlole kabanzi izimo lapho odokotela ukunquma "Polisorb" izingane. Yokusetshenziswa zomuthi kufanele zihlolwe ngaphambi ukusebenzisa, gcinani lokhu engqondweni.
Ngo-acute komzimba uhlamvu esabelwa ngesigezo "Polisorb" izingane esiswini. Isikali se-nomuthi 1 igremu ngayinye namamililitha 100 wamanzi. Powder slurry egeza Kwenziwa ka ipheshana wokugaya ukudla ngokusebenzisa uphenyo, bese uthatha nomuthi ku umthamo ejwayelekile. Bayanda manipulations ezinjalo zenziwa ezindongeni esibhedlela nabanye antihistamine.
Ngo komzimba okungapheli noma ngezikhathi ezithile zonyaka nomuthi engabelwe inkambo ethola esiyizinsuku ezingu-7 kuya kwengu-15. Uma kuziwa ukudla ukusabela, sokuqamba kufanele kuthathwe ngaphambi nje ngokudla. izidakamizwa ngempumelelo uma angioedema, urticaria, hay fever, hay fever, eosinophilia, kanye nezinye izifo atopic izingane. Abazali ngokuvamile abaqapheli ukuthi ingane yabo kukhona yokusabela kuya into ethile. Ukuqubuka kwesikhumba, bona asithe okhilimu okunamafutha, futhi amakhala yisisu kusolwa emakhazeni. Futhi nje ukunikeza "Polisorb" I-komzimba.
Ukuhlanzwa umzimba lapho anobuthi
Powder "Polisorb" ushevu izingane, njengoba kuvela, liyini ikhambi engcono. Iqiniso ukuthi umuthi iqala ukusebenza emizuzwini yokuqala emine ngemva kokuphathwa. Ngokuvamile, ubuthi kungenxa nokudla endala. Izimpawu zayo zaziwa kubo bonke: isicanucanu, ukuhlanza, ukukhishwa isisu. Futhi, ingane kungase kwandise izinga lokushisa ngenxa isenzo ubuthi. Kulesi simo, kubalulekile ukuqala ukwelashwa ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Lapho ukudla okunobuthi, izinto zasendlini, izidakamizwa "Polisorb" (izingane imfundo on ukusetshenziswa izimvume izidakamizwa) Kunconywa akunika izinsuku okungenani 3-5. Umuthi kumele uqale ukuphuza ama-ke ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngosuku komthamo wokuqala ingqikithi nomuthi ofanele ubudala, ihlukaniswe 6-7 izingxenye. Kwaphela amahora amahlanu sorbent ukunikeza ingane njalo ngehora, ngemva kwalokho udinga ukuthatha ingxenye esele okuvela kuyo le izidakamizwa usuku lonke. Kusukela ngosuku ukwelashwa amacebo yesibili ziyahlukahluka: powder ukunikeza ingane kane nsuku ngemithamo alinganayo.
Ukusebenzisa izidakamizwa ngesikhathi izifo ezithathelwanayo
Kuyinto imfihlo ukuthi "Polisorb" isetshenziselwa komzimba kanengi ukudlula phakathi izifo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane. Naphezu kwakho konke lokhu, lo mkhuba ubonisa ukuthi ukusetshenziswa sorbent kulezi zimo kunciphisa isikhathi lesi sifo izingane 3-5 izinsuku. Ufuna ukuthola umntwana kahle maduze? Uma kunjalo, funda indlela ukusebenzisa kahle "Polisorb" izingane.
sorbent ezisetshenzisiwe nazo zonke izinhlobo zezifo ezithathelwanayo: izinqubo sokuvuvukala izingxenye engenhla nengezansi umgudu wokuphefumula (sinusitis, sinusitis, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, pneumonia), engenhla boleznyahi zokuphefumula (otitis, namathansela, nasopharyngitis), izifo emathunjini (Rotavirus, adenovirus) nokunye. Nge zonke izifo emzimbeni wengane eba ukudakwa. "Polisorb" kuzokusiza ukuxazulula ngokushesha futhi ngaphandle imiphumela engemihle. Kubalulekile ukuthatha imithi ngesikhathi sonke isikhathi sokwelashwa. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukusetshenziswa ikhefu phakathi sorbent nezinye izidakamizwa kumele okungenani 1-2 amahora.
Umthamo kanye lwemithi ye nomuthi
Njengoba Kunconywa akunika "Polisorb" yokuzenzela? Izingane ezingaphansi kweminyaka eyodwa ukusetshenziswa ngonyaka zomuthi kungenziwa kuhlangene ukudla. izingane ezindadlana makamthathe sorbent ahlukaniswa ukudla (uma asikhulumi mayelana nokwelashwa komzimba ukudla). ingxenye nsuku zonke izidakamizwa kunqunywa ngokuhambisana ubudala nesisindo umzimba wengane. Kuyinto angu 100 kuya ku-200 kuso ingxenye esiyinhloko amakhilogramu esisindo ngamunye. umthamo Ubude kufanele ihlukaniswe 3-4 reception. bakhonze Minimal (100 mg / kg) iqondiswa e pathologies kancane ezinzima Ezimweni ezimbi kakhulu zidinga esiphezulu ivolumu izidakamizwa (200 mg / kg). Kodwa "Polisorb" Kunconywa engxenyeni emaphakathi 150 angu kwezidakamizwa amakhilogramu esisindo ngayinye. Ngu izibalo ezilula ungabona malini powder udinga ngqo ingane yakho. Yileyo isilinganiso eseduze esisindo kwezingane kanye isabelo semihla ngemihla umkhiqizo:
10 kg - kusuka 1 kuya 2 g;
15 kg - kusuka 1.5 kuya ku-3 g;
20 kg - kusuka 2 kuya 4g;
25 kg - kusuka 2.5 5 g;
30 kg - 3 kuya ku-6 g;
40 kg - kusuka 4 kuya kwezingu-8 g;
50 kg - 5 kuya 10 g;
60 kg - 6 kuya 12 g.
Khumbula ukuthi lezi zimiso kuyinsakavukela nsuku zonke, okuyinto kufanele ihlukaniswe izigaba eziningana. Ukuze kube lula imiyalelo ukupheka wawuthi isipuni zomuthi iqukethe 1 igremu zomuthi. Isipuni yokuhlala 3 amagremu nomuthi. Imithi esithathwayo kuphela ngemva zizalela ukuthethwa kwecala. Ukulungisa Ukwakheka udinga amanzi oluhlanzekile ekamelweni lokushisa in inani ayeyingxenye eyodwa kwezine noma inkomishi uhhafu. Beka ketshezi olulodwa umthamo isethi kanye isiyaluyalu. Phuza umuthi ngaphambi ishq kujule kuze phansi ingilazi. Njalo ukulungiselela isixazululo entsha.
"Polisorb" for izinsana ezisanda kuzalwa
Usuvele uyakwazi, incike nenqwaba ingxenye yomzimba imithi nsuku zonke wengane "Polisorb". Imiyalelo izingane ezingaphansi kweminyaka eyodwa imvume ngonyaka ukusebenzisa imithi. Sebenzisa sorbent kwamukelekile ngisho ezinsukwini zokuqala zokuphila. Ngenxa yokuthi ukuthi akukhona wakwamukela futhi akulimazi emzimbeni, le sorbent ayikwazi Ubephuze. Naphezu kwakho konke lokhu, kubalulekile ukuba athobele imikhuba namazinga esabekwa isichasiselo zomuthi.
Izingane nesisindo eziyishumi amakhilogremu imithi enqunywe ithisipuni lonke noma isigamu sosuku. Ngo yokungezwani komzimba oyingozi futhi ubuthi ingxenye kungase kukhule ku amathisipuni nenxenye. Njengoba inani nsuku zonke zomuthi sehlukaniswe 3-4 izikhathi, kuyadingeka ukuba ithathe umntwana 0.5 ithisipuni powder. Ivunyelwe ukuncibilikisa izidakamizwa e 30 namamililitha yamanzi, futhi unike yabo noma ixutshwe ukudla: isobho, ubisi, juice. Ingasetshenziselwa "Polisorb" ngoba colic e izinsana ezinyangeni zokuqala zokuphila. Kulokhu, imithi Uyoqeda flora pathogenic futhi normalizes ingane impilo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma ukunikeza i eyengeziwe antiflatulents ingane, kudingeka senze njalo emuva kwamahora ambalwa kusanda sorbent. Kungenjalo, ithonya lazo kuzoncishiswa zero.
Analogue "POLYSORB" izingane
Ngokuvamile abathengi ucela ukuthi kwamukelekile ukuba esikhundleni powder ngezinye izindlela. Yebo, kwemithi yesimanje inikeza okuningi sorbents ezahlukene. Zitholakala amaphilisi, ukumiswa, izimpushana, si, nokunye. Cishe bonke izidakamizwa yale plan babe ngento eyodwa: kungukuthi angena egazini futhi senze ngqo mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi emathunjini. Ngakho-ke, banikeze izingane zabo ngasiphi yobudala. Kubalulekile kuphela ngaphambi kokusebenzisa ufunde imiyalelo, ngoba indlela yokusebenzisa izindlela ezahlukene ezahlukene njalo.
Iningi okudayiswayo etholakalayo zingatholakala amathuluzi ezifana "Filtrum", "Enterosgel", "Smekta", "Polyphepanum", i-carbon isebenze nokunye.
Izibuyekezo kwakhiwa abathengi
Usuvele uyakwazi ukuthi isidakamizwa Positioning "Polisorb" imfundiso. Izibuyekezo Umthengi kakhulu badumise imithi. Ngekusetjentiswa kahle emiphumeleni yayo omuhle ubonakala cishe ngokushesha. Ingane kuba lula: lokushisa lomzimba encishisiwe, ubuhlungu besisu amuke, ibhalansi evamile amanzi-usawoti. Abazali abanezinsana batshelwa ukuthi ukusetshenziswa le imithi udambise ezinzima colic emathunjini in izinsana. Kakade ngosuku lokuqala sezinyawo kwengane kwaba evamile, ubuthongo Waba umuntu ophansi futhi eside. Nokho, akukho ukusabela ezingezinhle ezinganeni bobudala obungefani ziye ihlangabezane.
Kunobufakazi bokuthi kusikisela ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubangele ukuhlanza. Yingakho kubaluleke kangaka ukuhlonipha imigomo yokusetshenziswa powder "Polisorb" izingane. Kanjani ukunikeza izidakamizwa efanele, usuwazi. Ngaphambi ukusetshenziswa, ukuthola izincomo ngabanye kadokotela. Uma ngaphakathi 3 izinsuku nokusebenzisa powder umntanakho engazizwa kangcono ke kubalulekile ukufuna usizo lwezokwelapha futhi shintsha isu ukwelashwa. Abathengi 'Polisorb "ziba igugu ukutholakala kwabo. It has a izindleko yeningi futhi itholakala kuwo wonke inethiwekhi ekhemisi.
Kusukela sihloko ungase ufunde mayelana imithi "Polisorb". Iziyalezo izingane ezingaphansi konyaka is hhayi Kunconywa ukusebenzisa izidakamizwa ngaphandle kwemvume kadokotela. Ngokuvamile abazali abakwazi ayichaze izikhalazo yengane, ngoba grudnichok ukukhala nje futhi ukuthi ngeke ngikwazi ukubashumayeza. Qiniseka ukukhombisa ingane kudokotela, futhi kuphela ngaphansi kokutusa onguchwepheshe, makangilandele "Polisorb". Bagcine umthamo osungulwe futhi isikhathi sokwelashwa. Okuhle impilo Daze yakho!
Ungakhipha kanjani isiqeshana sevidiyo? Kulula!
Idlalwa impilo encane